အဆိုတျော ရမှေနျမကြှတျလှတျသေးဘူးဆိုတဲ့ အကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီးပွောပွလာတဲ့ လပွညျ့ကဗြ – Buanchukcho
အဆိုတျောရမှေနျမကြှတျလှတျသေးဘူးဆိုတဲ့ အကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီးပွောပွလာတဲ့ လပွညျ့ကဗြ
အဆိုတျောရမှေနျကတော့ သူ့ရဲ့သီခငျြးတှနေဲ့ရိုးသားတဲ့စိတျလေးကွောငျ့ မိတျဆှမြေားနဲ့ပရိသတျမြားကအားပေးခဈြခငျနခေဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ဇှနျလ၂၃ရကျနမှေ့ာဆိုရငျတော့အဆိုတျောရမှေနျကထှကျပွေးတိမျးရှောငျရငျးကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ရုတျတရကျကှယျလှနျသှားခဲ့ရပါတယျ၊
အဆိုတျောရမှေနျရဲ့မိသားစုမြားနဲ့သူ့ရဲ့ပရိတျသတျကွီးမြားနဲ့အတူထပျတူဝမျးနညျးရပါတယျ။ မကွာခငျရကျပိုငျးလေးတုနျးက ရမှေနျနဲ့ပကျသကျပွီး မကြှတျလှတျသေးဘူး. .. သူနထေိုငျခဲ့တဲ့နရောတှမှော တှတှေ့နေ့ရေတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှထှေကျလာပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ ရမှေနျ့မိခငျနဲ့ညီမလေးလညျး ခံစားနေ
ရတာ ဖွဈပါတယျ. ဒါကွောငျ့ လပွညျ့ကဗြာက အဈကိုဖွဈသူအဆိုတျောရမှေနျမကြှတျလှတျသေးဘူးလို့ပွောတဲ့လူတှကေိုဒဲ့ပွောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျနျော။ လပွညျ့ကဗြာကဘပီကိုသူလုပျစခေငျြတာလေးတှေ၊သူလိုအပျတာလေးတှလေုပျပေးခငျြတာ၊အခုတော့မပွီးမပွတျနဲ့ထားခဲ့ရပွီ၊ဘပီကောငျးရာမှနျရာ ရောကျ
လဲအစထဲကဒဇာတျလမျးကိုမစနဲ့၊Attentionလိုခငျြတာတခုနဲ့ဒီမိသားစုကိုအသုံးခပြီးတငျမနပေါနဲ့။ဘပီကိုလုပျပေးစရာရှိတာတှလေုပျပေးပွီးသူ့သှားရမယျ့လမျးစိတျဖွောငျ့ဖွောငျ့နဲ့သှားစခေငျြလို့ဆိုပွီးရေးသားဖျောပွထားပါတယျ၊။ သဆေုံးပွီးတဲ့သူနဲ့ပကျသကျတဲ့ကောလဟာလတှကေိုလညျး ထပျပွီးမပွောဖို့ သူမက တောငျးပနျထားပါသေးတယျ။
အဆိုတော်ရေမွန်မကျွတ်လွတ်သေးဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောပြလာတဲ့ လပြည့်ကဗျာ
အဆိုတော်ရေမွန်ကတော့ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေနဲ့ရိုးသားတဲ့စိတ်လေးကြောင့် မိတ်ဆွေများနဲ့ပရိသတ်များကအားပေးချစ်ခင်နေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၂၃ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့အဆိုတော်ရေမွန်ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်၊အဆိုတော်ရေ
မွန်ရဲ့မိသားစုများနဲ့သူ့ရဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးများနဲ့အတူထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်းလေးတုန်းက ရေမွန်နဲ့ပက်သက်ပြီး မကျွတ်လွတ်သေးဘူး. .. သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ တွေ့တွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ရေမွန့်မိခင်နဲ့ညီမလေးလည်း ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်.
ဒါကြောင့် လပြည့်ကဗျာက အစ်ကိုဖြစ်သူအဆိုတော်ရေမွန်မကျွတ်လွတ်သေးဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုဒဲ့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ လပြည့်ကဗျာကဘပီကိုသူလုပ်စေချင်တာလေးတွေ၊သူလိုအပ်တာလေးတွေလုပ်ပေးချင်တာ၊အခုတော့မပြီးမပြတ်နဲ့ထားခဲ့ရပြီ၊ဘပီကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်မယ်လို့သိထားပီးသား၊ဒါေ
မစနဲ့၊Attentionလိုချင်တာတခုနဲ့ဒီမိသားစုကိုအသုံးချပီးတင်မနေပါနဲ့။ဘပီကိုလုပ်ပေးစရာရှိတာတွေလုပ်ပေးပြီးသူ့သွားရမယ့်လမ်းစိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့သွားစေချင်လို့ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊။ သေဆုံးပြီးတဲ့သူနဲ့ပက်သက်တဲ့ကောလဟာလတွေကိုလည်း ထပ်ပြီးမပြောဖို့ သူမက တောင်းပန်ထားပါသေးတယ်။